Igumbi le-SHS 5 kwezi-6
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguLata
ULata unezimvo eziyi-90 zezinye iindawo.
Indawo yam ikufuphi ne-Badgaon yi-4.5 KM kuphela ukusuka echibini elihle le-Fateh Sagar enye yeendawo ezinzulu zolutsha lwase-Udaipur .. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yendawo. Indawo yam ilungile kumaqabane, abahambi bebodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), amaqela amakhulu.
Indawo yokuhlala yaseSingh ijikelezwe yiAravalli Hills. Imbonakalo yohlaza enomtsalane kwibalcony yegumbi ngalinye. Ukuhlala ngaphandle kongcoliseko kuya kwenza uhambo lwakho lukhuseleke kwaye lube ntle.
I-Singh Home Stay, i-Udaipur, i-Rajasthan, i-Indiya, ibonelela ngebhedi & nesidlo sakusasa, indawo yokuhlala ekhaya kunye nokulula kwezindlu zenkonzo. Nokuba ukutyelelo olufutshane okanye iholide eyandisiweyo; ufuna ukufumana ukutya okuphekiweyo kwikhaya lethu okanye ungathanda ukuziphekela ngokwakho, uya kufumana amagumbi ethu, eyilelwe ngokukhululekileyo ukuba ahambelane nezinto ozithandayo, ikhaya elifanelekileyo-kude nekhaya.
Yitya usempilweni, Hlala Unamandla ngokongangamsha kwezondlo nge-100% yokutya kwe-ORGANIC. Yenza Uxinzelelo lwakho lokuhamba lusimahla ngeeSeshini zeYOGA. Yiba namava okusiNgqongileyo okuseKhaya ngokujijwa kweNtsebenziswano yeNkcubeko kunye nabahlali besizwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Lata
Thina eSingh Home Stay siya kufumaneka iiyure ezingama-24 kwipropathi ngalo naluphi na uncedo kunye noncedo olongezelelweyo olunxulumene ne-Udaipur okanye imimandla ekufutshane.
Sikwabonelela ngesithuthi esirentwayo ngamaxabiso aphantsi kakhulu xa kuthelekiswa nemarike.
Thina eSingh Home Stay siya kufumaneka iiyure ezingama-24 kwipropathi ngalo naluphi na uncedo kunye noncedo olongezelelweyo olunxulumene ne-Udaipur okanye imimandla ekufutshane…